Ụbọchị My Pet » Little Mara ụzọ na-Ịhụnanya nke Ndụ Gị
Mgbe anyị niile image na akara aka arụ ọrụ dị mkpa na-ada na ịhụnanya, na omume anyị pụrụ mgbe ụfọdụ ike ikwusi ike. N'okpuru ebe, anyị egwupụtawo Ụzọ dị iche iche i nwere ike inwe ịhụnanya nke ndụ gị.
Little Mara Ụzọ #1: -Adị njikere Ịhụnanya
A mmekọrịta na-ewe oge, nkwa, na vulnerability. Isi ihe na-a ike na ihe ịga nke ọma ná mma bụ ịhụ onwe gị n'anya mbụ, ụdị ịhụnanya a-enye gị ohere ịhụ n'anya n'ezie na onye ọzọ. Strong mmekọrịta, na onwe gị na ndị ọzọ, na-wuru n'elu ntụkwasị obi, ikwu eziokwu, na nkwurịta okwu na.
Little Mara Ụzọ #2: Mara na Mara Your Standards
Mgbe ọ na-adịghị mma na-ekpe ikpe na mmadụ kpamkpam site ha flaws, ọ dị mkpa ịkpara ha ókè. Anyị niile maara na e nwere ndị ụfọdụ echiche na akparamàgwà ndị pụrụ igbochi gị mmekọrịta. Anyị makwa na e nwere ndị ụfọdụ àgwà ndị na e ji mara na anyị chọrọ ka na a mmekọrịta. Ịmara ndị ga-enyere kpuchie ụzọ na-eweta gị ịrịba ama ndị ọzọ.
Little Mara Ụzọ #3: Mara iche n'ịhụ a Onye na ha n'anya n'Anya
Ọ dịghị ihe gbagwojuru ịbụ na ịhụnanya; Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ a mmetụta overpowers ezi echiche banyere anyị na onye òtù ọlụlụ. Ọ dị mkpa ka ntị ka ma i nwere ike ịmata ọdịiche dị n'etiti ihe mmadụ na isi àgwà na omume unu wetara ha.
Little Mara Ụzọ #4: -Abụ na-nri ebe na Right Time
E nwere ụfọdụ ebe ndị anyị na dị nnọọ eche dị ka anyị bụ na anyị mmewere. Ma ọ bụ na-enwe obi ụtọ hour na enyi, na a egwu ma ọ bụ art show, ma ọ bụ na a na klas, -ahụ. Àgwà gị ga na-enwu, na-eru ndị mmadụ ị.
Little Mara Ụzọ #5: -Agbalịsi maka mmetụta uche Intimacy tupu Physical Intimacy
na-achọta “ịhụnanya nke ndụ gị”, nkekọ nke mmetụta uche dị oké mkpa. Mgbe ọkụ ọkụ banye ahụ ka izu nzuzo ọ bụchaghị a ihe ọjọọ, ọ pụrụ ime ka nkekọ nke mmetụta uche ndị ọzọ siri ike ịnyagharịa.
Little Mara Ụzọ #6: atụkwasị obi Onwe Gị
-Ege gị gootu, inwe ahụ iru ala na-ewere oge gị, na-enwe ndidi na gị ikpe. N'otu oge ahụ, ọ dị mkpa ịnọgide na-emeghe ka ọhụrụ echiche na nghọta na ịhụnanya.
Ma ya akara aka, ndị a dị nta mara ụzọ, ma ọ bụ ma – ọ dị mkpa ịkwụsị inwe ezi ịhụnanya ha. N'ihi na ozugbo na ị nwere ya, ọ bụ ihe kasị akwụghachi ụgwọ mmetụta na ụwa.